Nhau - Maitiro Ekutora Magirazi eChiso Chako Chimiro
Wakambove nedambudziko kuyedza kufunga kuti nderupi furemu rakanakira kumeso kwako? Zvakanaka une mhanza! Nemutungamiriri wedu mudiki, iwe unozodzidza kuti pane furemu yemunhu wese - uye isu tinogona kukuudza iwe chakanyanya kukodzera iwe!
Ini ndine chimiro cheuso.
Zvichida iwe une imwe yeanotevera mafomu echiso: denderedzwa, mativi, denderedzwa, moyo, kana dhayamondi. Nekutarisa pagirazi uye nekunyatso tarisa kumeso kwako, iwe unogona kuona kuti ndeupi anokufananidza iwe! Verenga pane pazasi kuti uone maitiro ekuona chimiro chechiso chauinacho, uye magirazi api anotaridzika akakwana pauri.
Ndeapi Magirazi Maumbirwo Anokodzera Oval Meso?
Magirazi mazhinji akasiyana anowirirana nezviso zveoval. Chiso chine chimiro chedenderedzwa chine mativi akakwirisa uye akapamhamha zvishoma anotetepa zvishoma pahuma. Ichi chakareba, chakakomberedzwa chimiro chechiso chinokutendera iwe kuti ubvise chero chero dhizaini - kunyanya akakurisa uye akafara mafuremu. Uine oval kumeso chimiro, inzwa wakasununguka kuenda wakashinga nemusara unonakidza, dhizaini kana furemu chimiro. Square, trapezoid, kamba, uye rectangular - iwo mikana haagumi!
Yedu chete kuraira ndeyekuzvichenesa pamafirita akatetepa uye mafuremu ane zvinorema dhizaini yezvinhu. Ivo vanogona kuwedzera hushoma hwehurefu husina basa kune yako denderedzwa kumeso.
Ndeapi maGirazi Maumbirwo Anokodzera Mativi Echiso?
Mhando dzakasiyana dzemagirazi dzinoenderana zviso zvakaenzana. Icho chiuno kuva mraba! Kana iwe uine chiso chakaita sekwere, akawanda akakurisa magirazi emaziso anokwanisa kubatisa maficha ako. Kana zvasvika pakuenzana, zviso zvakaenzana zvakapamhamha pashaya nehuma. Nekuda kwechimiro ichi chiri kutsanangurwa neshaya yakasimba, magirazi anogara kumusoro pamhino anowedzera hurefu hunobata kumeso uku.
Kuti utore kutarisisa kune ako akasimba maficha, sarudza rakasviba uye rakatenderedzwa, pane angular, furemu. Chimiro chegirazi regirazi rinotenderedza pamwe nekuwedzera musiyano kune ako angular maficha, achiita kuti chiso chako chionekwe. Rimless uye semi-rimless mafuremu inzvimbo yakanaka kutanga.